I-Luxury Beachfront Villa | 5★ Indawo, Iphuli, Ukubukwa
Larrakeyah, Northern Territory, i-Australia
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Elle
Ngena ungene endaweni yokunethezeka yale villa engasebhishi enezindawo zokungcebeleka ezivelele eCullen Bay.
Itholakala kuphela kumakhilomitha angu-2.5 ukusuka e-Darwin CBD, le villa ithembisa ukuhoxa emadolobheni nebanga lokuhamba elilula ukuya ezindaweni zokudlela ezinhle, izitolo namabhishi amahle. Ukuhlala ogwini okuyiqiniso kusezingeni eliphezulu.
✔ 4 Imibhede Ethokomele
✔ Ikhishi Elihlonyiswe Ngokugcwele
✔ I-Private Plunge Pool & Nezindawo Zangaphandle
✔ I-Smart TV
✔ I-Wi-Fi enesivinini esikhulu
✔ Vikela Ukupaka Kwamahhala
✔ I-Air Conditioning kuwo wonke amagumbi
Njengoba ungena kule villa enkulu kanokusho, wamukelwa indawo yokuhlala enesitayela kodwa enethezekile enohlelo oluvulekile, enetimu yesimanje egqamile encoma ukubukwa okumangalisayo, okungakhawulelwe kolwandle nolwandle.
I-3D FLOOR PLAN yendawo ingatholakala ezithombeni
Ikhishi elihlome ngokuphelele livula egumbini lokuhlala lokuzijabulisa, libeka ithoni yokuhlwa okuningi okukhumbulekayo. Kodwa okuhle kakhulu kuseza - hamba ngeminyango yengilazi uye endaweni yakho yangasese, unikeze ukubukwa okungapheli kolwandle kanye nezinsiza eziningi zokunethezeka.
★ IGUMBI LOKUPHILA ★
Ngokushesha kuzwakala sengathi kusekhaya, kunosofa abathokomele, itafula lekhofi leziphuzo nokudla okulula, kanye ne-TV ehlakaniphile yasebusuku bamamuvi.
✔ I-Smart TV ene-Netflix, i-Disney +, i-Stan, i-BritBox, i-Binge ne-Hayu
✔ 2 Osofa Abanethezekile
✔ Ithebula Lekhofi Lesitayela
✔ Ukufinyelela ku-Terrace
✔ Imidlalo Yebhodi
✔ Izingubo zokulala ezixubile
★ IKHISHI NEKUDLA ★
Yenza ukudla okumnandi komndeni wakho nabangane ekhishini elihlome ngokuphelele elinophahla olubanzi lwe-granite countertops kanye eduze nezinto zikagesi ezintsha.
✔ Umshini wokuwasha izitsha
✔ I-Milk Frother
✔ Umshini we-Espresso
✔ I-Coffee Plunger
✔ Ikhofi Elimnandi, Itiye, Ubisi, Ukupheka Kubalulekile, Ukudla Okuncane Nokunye Okuningi
✔ Ikhithi Yosizo Lokuqala kanye Nezinto Eziwusizo (Isikrini selanga, Isixosha Izinambuzane njll.)
✔ Usinki - Amanzi Ashisayo Nabandayo
✔ Izimbiza namapani (Stanley Rogers)
✔ Ama-Yeti Tumblers kanye nama-Stubby Coolers
✔ Isethi Yetiye Eliphezulu
Uzothola indawo yokudlela ethandekayo phakathi kwegumbi lokuhlala nekhishi. Phaka ukudla kwakho okumnandi etafuleni lokudlela elikhulu uma ukhetha ukuhlala futhi ujabulele ukudla okuphekwe ekhaya. Ikhawunta yasekhishini enezihlalo zebha iyindawo ekahle yokuba neziphuzo ezimbalwa noma okunye ukudla kwasekuseni ngaphambi kosuku olukhulu lokuhlola i-NT.
✔ Itafula lokudlela elinezihlalo ezingu-6
✔ Ikhawunta Yasekhishini enezihlalo eziyisi-6 zamabha
★ AMALUNGISELELO OKULALA - AMAGUMU EMI-4★
I-villa inamakamelo okulala amane afakwe kahle, le ndawo ihlukile ngoba inamagumbi okulala amabili amakhulu. Njengakwezinye izingxenye zekhaya, kune-air-conditioning kuwo wonke amagumbi okulala kulobo busuku obufudumele basezindaweni ezishisayo. Slayida uvule iminyango yevulangabhu ukuze uthole isidlo sasekuseni embhedeni ngokubukwa kolwandle nomoya omusha wasolwandle.
♛ Igumbi lokulala 1 (Igumbi lokulala elikhulu, i-Ocean View)
✔ Imibhede Ewusayizi Wenkosi Enemicamelo, Umcamelo, Ilineni, Izingubo Zokulala Namashidi
✔ I-Walk-in Wardrobe eneziphanyeko namashalofu
✔ IKhabhinethi enamaDrowa Abanzi
✔ Izitendi zasebusuku ezinamalambu okufunda
✔ Wireless Apple kanye Samsung Ishaja
✔ Igumbi lokugezela le-Ensuite
✔ Ukufinyelela Okuqondile ku-Balcony yangasese
✔ Izimpumputhe ze-Blockout
♛ Igumbi lokulala 2 (igumbi lokulala elikhulu lesibili, i-Marina View)
✔ Imibhede Ewusayizi Wendlovukazi Enemicamelo, Amakhushini, Ilineni, Izingubo Zokulala Namashidi
✔ I-Wardrobe eyakhelwe ngaphakathi eneziphanyeko namashalofu
✔ Ukuma Kwasebusuku Nelambu Lokufunda
✔ Ukufinyelela Eceleni Kuvulandi
♛ Igumbi lokulala lesivakashi 1 (Ukubuka kwe-Marina)
✔ Ukufinyelela Okuqondile ku-Marina-View Balcony
♛ Igumbi lokulala lesivakashi 2 (I-Ocean & Marina View) - sicela uqaphele leli gumbi lokulala lisezingeni eliyimfihlo le-mezzanine kodwa alihloliwe
✔ Umbhede Wendlovukazi onemicamelo, amakhushini, amalineni, izingubo zokulala namashidi
✔ Amadrowa Abanzi
I-villa inamagumbi okugezela amathathu agcwele, agcwele izinto eziningi eziwusizo, amathawula, nazo zonke izinto ezibalulekile.
✔ Sink Ngeze
✔ Izindlu zangasese
✔ Izibuko ze-LED Make-up
✔ Izomisa izinwele
✔ I-Shampoo, I-conditioner & Ukugeza Umzimba Kunikeziwe
★ IZINDABA NGAPHANDLE ★
Le villa kanokusho ikhanya ngenxa yendawo engasebhishi kanye nazo zonke izindawo ezingaphandle nezinsiza ongabuka kuzo ukushona kwelanga okujabulisayo.
✔ I-Balcony Echichimayo Isikhala (Ukubuka Kolwandle Nokubukwa Kwe-Marina)
✔ Indawo yephuli
✔ I-BBQ Grill
✔ 2x Izindawo zokudlela ezineThebula nezihlalo
✔ Indawo Yokuphumula Ekhululekile
✔ I-Balcony yangasese ye-Master Bedroom (enendawo yayo yokuhlala)
★ IWASHA ★
Ilondolo efakwe ngokugcwele.
✔ Umshini wokuwasha
✔ Ibhodi loku-ayina / uku-ayina
✔ Izingubo Zekhwalithi Ye-Fabric Steamer
✔ I-Air-Dry Rack enezikhonkwane
✔ Ikhithi Yokuthunga Ephuthumayo
✔ I-Lint Roller
✔ Ukugeza Nokucwiliswa Kuhlinzekiwe
★ UKUHAMBA NEZINGANE ★
Ukuhamba nezingane kungaba umgomo, ngakho-ke senza konke okusemandleni ethu ukudambisa lowo mshikashika ngokukunikeza izinsiza eziningi ukuze wenze ukuhlala kwakho kungabi kunakekelwa ngangokunokwenzeka:
✔ Umbhede Wezingane
✔ Isihlalo esiphezulu
✔ Izinto Zokugeza
✔ Izingane Cutlery / Crockery
✔ Amabhayibheli eSilicone
✔ Amabhodlela Ezingane (Isteriliser, Warmer)
✔ Pool & Beach Amathoyizi
✔ Izinsiza Zezemidlalo
Ukuze izingane zakho ziphephe, ichibi le-plunge lifaka ikhava yokuphepha yensimbi evaleleke phansi ekhiyekayo. Izingidi ezinamakhodi nazo zihlinzekwa kuwo wonke amasango angaphandle.
Sibheke ngabomvu ukukubamba, futhi usazise uma unemibuzo; sijabule kakhulu ukusiza.
4.96 ·75 okushiwo abanye
Phatha! ICullen Bay Villa ibona abantu baseLarrakia njengabagcini bendabuko balo mhlaba. Siyakwamukela ukuxhumana kwabo okude nokuqhubekayo emhlabeni. Sihlonipha kwabadala bakudala, abamanje nabasafufusa.
Izindawo okuyiwa kuzo ezingaphakathi kwebanga lokuhamba le ndawo zifaka iMindil Beach Casino, iMindil Beach Markets, iGeorge Brown Botanic Gardens, iGolf Course, inkundla ye-AFL, imnyuziyamu, kanye negalari yobuciko yaseNorthern Territory & the Darwin CBD.
I-villa yonke engasebhishi itholakala endaweni ephephile futhi enokuthula iCullen Bay, indawo kaNdunankulu endaweni yaseDarwin enenkonzo yayo yezokuphepha yangasese engu-24/7, esekelwa uhlelo olubanzi lweCCTV. ICullen Bay ukuphela kwendawo engaphansi kweDarwin enenkonzo yayo yezokuphepha yangasese.
Letha izihlalo zekamu lokunethezeka ezinikeziwe, i-esky, iragi yepikiniki, kanye ne-YETI stubbies ebhishi futhi uhlanganyele nabantu bendawo abanobungane esikweni labo lezinhlanzi nama-chips ogwini njengoba kushona kwelanga.
Ukuze uthole okuthile okusemthethweni, i-Cullen Bay ihlinzeka ngohlu olude lwezindawo zokudlela ezinhle nezokuzijabulisa ngaphakathi kohambo lweminithi elingu-1. Kanye nezindawo zokudlela eziningi, le ndawo ihlanganisa nesitolo sika-ayisikhilimu kanye nesitolo sikaphaya, okuwukudla okulungile ngemuva kwamahora ambalwa ogwini.
ICullen Bay isanda kuthola ukuvuselelwa kwezakhiwo eziyizigidi eziyishumi zamaRandi (okugcizelela kakhulu ukukhanya kobuciko). Lokhu kunikeza ingemuva elimnandi lezithombe ezintsha zomndeni.
Njengoba iCullen Bay iqhele ngamakhilomitha angu-2.5 kuphela ukuya e-Darwin CBD, unazo zonke izinto ezilula zokuba sendaweni emaphakathi, okuhlanganisa nokufinyelela ku-Uber Eats, izimoto ze-Uber, ukulethwa kwegrosa kwa-Woolworths kanye ne-Coles, kanye namabhayisikili e-Darwin City Council kanye nama-e-scooters.
I-Cullen Bay Ferry Terminal yilapho iningi labadobi e-Darwin lisuka khona. Uma uthanda ukudoba, ungaphuthelwa yithuba lokugxumela futhi ujahe i-Mackerel emnandi, i-Jew Fish ('amaJuda'), kanye ne-Red Emporer. I-charter yosuku olugcwele ikuvumela ukuthi uye ezindaweni ezihlanzekile njenge-Peron Islands, i-The Pinnacles, i-Point Blaze, ne-Bass Reef.
Ngokungeziwe kumashadi okudoba, i-SeaLink Ferry eya emiphakathini yezizwe zokuqala edume umhlaba wonke eziQhingini zaseTiwi nayo iyasuka e-Cullen Bay Ferry Terminal. Abantu bakwaTiwi baziwa emhlabeni wonke ngesitayela sabo sobuciko, okuhlanganisa ukuqoshwa kanye nemiklamo yendwangu ekhanyayo. Ehlonishwa ngabaqoqi, abaculi abaningi be-Tiwi baye babonisa emhlabeni jikelele.
Xhumana nathi namuhla ukuze siqale ukuhlela iholide lakho lomndeni elikhumbulekayo!
Hlola ezinye izinketho ezise- Larrakeyah namaphethelo